musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Amazon inovimbisa zvibvumirano zvikuru panguva yeCyber ​​​​Muvhuro vhiki
Maka makarenda ako ekupera kwevhiki kwekuchengeta. IAmazon nhasi yakaratidza kudongorera kwezviuru zvezvibvumirano nevatengi vanogona kutenga panguva yayo yeCyber ​​​​Monday inobata vhiki, iyo inotanga neMugovera, Mbudzi 27, uye inotanga kusvika Muvhuro, Mbudzi 29.
Muchiitiko chese chezvibvumirano, vatengi vanogona kuwana mari inoshamisa muchikamu chega chega, pamwe nekudzikiswa kwakadzama pazvigadzirwa zvakakurumbira uye zvinofanirwa-kuve nezvinhu zvinosanganisira zvemagetsi kubva Samsung neLG, kumba nekicheni zvakakosha kubva kuShark, Vitamix, uye Cuisinart, inofanirwa-kuva nematoyi. kubva kuHasbro, LEGO, uye Crayola, runako runofarira kubva kuRevlon, mapikicha epamusoro kubva kuRay-Ban, uye sarudza zvishandiso zvinogonesa Alexa seAmazon Fire TV 50” 4-Series. Kupera kwevhiki rese, vatengi vanogona zvakare kutenga zviuru zvezvibvumirano zvinoshamisa kubva kune vakazvimiririra vanotengesa vadyidzani, mazhinji acho ari madiki uye epakati mabhizinesi mabhizinesi, kusanganisira madhiri kubva kune evakadzi, evatema, uye emauto emhuri mabhizinesi.
Kune vatengi vanoda kumwe kurudziro zvishoma pane zvekupa vadikani vavo gore rino, Amazon yakakufukidza. Mumwaka wese vatengi vanogona kuenderera mberi nekutenga nekutsvaga zvinhu kubva kuAmazon hombe sarudzo yezvipo zvinongedzo-kusanganisira yakakurumbira Holiday Toy Rondedzero uye Oprah's Favorite Zvinhu runyorwa, pamwe neyakavharirwa 'Vatengi' Vanonyanya Kudiwa Zvipo gwara uye Nyanzvi 'Zvipo Zvisarudzo. Chipo chegwaro, iro rine mapikicha epamusoro kubva kuA-list vane mukurumbira vakaita saJessica Alba, Jojo Siwa, menduru yegoridhe Suni Lee uye influencer duo Aint Afraid, uye midhiya inoburitsa BuzzFeed uye Refinery29, pakati pevamwe.
PaCyber ​​​​Muvhuro, Amazon Live ichaita zviitiko zvakasiyana-siyana zvehupenyu zvinoratidzira kusarudzwa kwakasarudzika kweakanakisa zvibvumirano, kuratidzira kwechigadzirwa, kuedza-kudhonza, uye nhaurirano dzepamoyo dzinoitwa nevanozivikanwa uye vane simba, kusanganisira supermodel uye muzvinabhizimusi Miranda Kerr, muimbi wenyika uye munyori wenziyo Jessie James. Decker, uye fashoni anokurudzira Aimee Song. Vataridzi vanogona kutenga zviri nyore zvigadzirwa nemabhureki kuburikidza nekarosi inogadziridza munguva chaiyo.
Pazasi pane sampling yezvibvumirano zvepamusoro uye zvigadzirwa zvichave zviripo pamazuva uye nguva dzakasiyana pakati peMugovera, Mbudzi 27, uye Muvhuro, Mbudzi 29, apo zvigadzirwa zvichiripo. Vatengi vanogona kutenga madhiri eCyber ​​​​Monday paAmazon yekutenga app, kana nekubvunza, "Alexa, ndezvipi zvibvumirano zvangu?" Sarudza Cyber ​​​​Monday zvibvumirano zvichave zviripo kune ese maAmazon 4-nyeredzi chitoro uye Amazon Books chitoro nzvimbo. Nhengo dzePrime zvakare dzinogona kunakidzwa nemaminitsi makumi matatu ekutanga kuwana kune inopisa Mheni Deals paAmazon mukati memwaka wezororo, uye mazuva ese.
Toys neMitambo: Sevha inosvika makumi matatu muzana pakusarudza seti yekuvaka, kusanganisira kubva LEGO uye Playmobil. Sevha inosvika makumi matatu muzana pamitambo yeHasbro. Sevha inosvika makumi matatu muzana pamateyi ehunyanzvi uye emhizha kubva kuCrayola nemamwe mabhureki. Sevha inosvika 30% pamitambo yebhodhi yakasarudzwa inosanganisira Catan uye Tiketi rekukwira. Sevha inosvika makumi matatu muzana paOsmo kits yekudzidzisa nemitambo. Chengetedza kusvika ku30% paZvishandiso Zvekudzidza uye Dzidzo Yekuziva matoyi ekudzidza.
Mwaka Fashion: Chengetedza kusvika ku40% pakusarudza Orolay pasi mabhachi nemapaki.Chengetedza kusvika ku30% pakusarudza Crocs. Sevha inosvika 30% pakusarudza True & Co. bras nezvipfeko zvemukati. Sevha inosvika makumi matatu muzana pakusarudza magirazi ezuva eRay-Ban. Sevha inosvika makumi maviri muzana pazvipfeko zvekunze zvakasarudzwa kubva kuna Calvin Klein, Tommy Hilfiger, DKNY, nezvimwe. Chengetedza kusvika ku30% paT-shirt Yakagadzirirwa Iwe. Sevha inosvika makumi maviri neshanu muzana pazvitaera zvinoshanda uye zvekutandarira kubva kuShopbop, kusanganisira Honeydew Intimates, Z Supply, uye Alala.
Imba neKitchen: Chengetedza kusvika ku35% pakusarudza Instant Pot midziyo, uye sarudza cookware nekicheni yakakosha kubva kuAll-Clad, Ninja, Vitamix, Calphalon, Cuisinart, uye SodaStream. Sevha inosvika 31% pakusarudza iRobot Roomba vacuums, sarudza zvinonatsa mweya kubva kuBlue Air neCoway, nemichina yekusonesa kubva kuHama naSinger. Chengetedza kusvika ku30% pane yakasarudzwa fenicha.
Electronics: Sevha inosvika 33% pakusarudza maTV kubva kuSamsung, Sony, uye LG. Sevha pane yakasarudzwa mahedhifoni kubva kuBose, Sony, uye JBL. Sevha inosvika makumi matatu muzana pane yakasarudzwa HP monitors, malaptop, uye ese-mu-imwe desktops. Sevha inosvika 30% pakusarudza Nixplay digital mafoto mafuremu. Sevha madhora makumi maviri pakusarudza Nintendo Switch Pro controllers. Sevha 34% paMYNT20D Professional Printing 25D Pen.
Runako uye Kuchengeta Pamunhu: Sevha inosvika makumi mashanu muzana pakusarudza mabhurasho emazino emagetsi kubva kuOral-B uye Philips Sonicare. Chengetedza kusvika ku50% pamagetsi ekugera, reza, uye mablades kubva kuBraun, Gillette, nezvimwe. Chengetedza kusvika ku39% pakuchengetwa kwebvudzi kubva kuRevlon, Bed Head, uye mamwe mabhurendi. Sevha inosvika 30% pa52andMe Personal Genetic Service DNA Test Kits.
Amazon Brands: Sevha inosvika makumi matatu muzana paAmazon Basics kicheni zvigadzirwa. Chengetedza kusvika ku30% pazvipfeko zvevana nevacheche kubva kuMarudzi Edu. Chengetedza kusvika ku30% pakofi kubva kuZvigadzirwa zvedu.
Amazon Zvishandiso: Chengetedza kusvika ku47% paEcho Show 5. Chengetedza kusvika ku45% paAmazon Halo Band fitness tracker. Sevha inosvika makumi mana muzana pa Kindle uye kusvika 40% pa Kindle Paperwhite Vana. Sevha inosvika makumi mana muzana paFire HD 28 Vana Pro piritsi. Sevha inosvika 40% paFire TV Stick 10k Max. Sevha inosvika makumi matatu muzana paAmazon Fire TV 36” 4-Series.
Kuvandudza Kumba, Zvishandiso, uye Gadheni: Sevha inosvika makumi matatu muzana pane yakasarudzwa BLACK + DECKER maturusi. Sevha pane zvakasarudzwa maturusi kubva kuDEWALT, GEARWRENCH, uye SKIL. Sevha 30% pane yakasarudzwa Level Home smart makiyi. Chengetedza kusvika 25% pakusarudza spas nemadziva kubva kuBestway nezvimwe.
Mwana: Sevha pane zvakasarudzwa zvevana zvakakosha kubva kuPhilips Avent. Chengetedza pane zvakasarudzwa zvekudyisa zvigadzirwa kubva kuna Dr. Brown zvakaita semabhodhoro nemapacifiers. Sevha pane sarudza Cybex gb Pockit strollers. Chengetedza kusvika ku30% pazvigaro zvemotokari zveBritax. Sevha 25% pane sarudza Chengetedzo 1st Kura uye Go zvigaro zvemotokari. Uyezve, chengetedza pazvinhu zvakasarudzwa kubva kuJoovy mwaka uno wezororo.
Zvipfuwo: Chengetedza 30% pane zvakasarudzwa zvipo zvemhuka uye zvekushandisa, zvinosanganisira matoyi, zvinobata, mibhedha, uye makireti. Chengetedza kusvika ku25% pane zvakasarudzwa Bissell pet care zvinhu. Sevha 20% paPetmate Husky Dog House yembwa inosvika makumi mapfumbamwe emapaundi. Gamuchira sampuli yemahara yeGreenies chigadzirwa chitsva chekuwedzera, nepo zvekushandisa zvichiripo.
Mitambo Nekunze: Sevha inosvika makumi matatu muzana pakusarudza Nalgene Sustain mabhodhoro emvura. Chengetedza kusvika ku30% pakusarudza Weider Platinum Simba zvigadzirwa. Sevha inosvika makumi matatu muzana pakusarudza mabhodhoro eCamelBak uye zvishongedzo. Chengetedza kusvika ku30% pakusarudza ma scooters emagetsi, maraki ebhasikoro, uye zvimire kubva kuSegway, Hover-30, nezvimwe.
Varaidzo: Sevha kusvika ku50% pa sarudza Prime Vhidhiyo mabhaisikopo ekuhaya kana kutenga, kubva pazvitsva zvitsva kusvika kumakirasi, pamwe neanorova TV anoratidza, zvemwaka zvemukati, nezvimwe. Uyezve, vatengi vatsva vanowana 50% kubva mumwaka uno weNBA League Pass uye NBA Team Pass kunyorera zvichitevera muyedzo wemazuva manomwe wemahara. Sevha neAmazon Music Unlimited, yemahara kwemwedzi mitatu kune vatengi vatsva, kana yemahara kwemwedzi mitanhatu nekutenga kwekusarudza Amazon Echo zvishandiso. Uyezve, vatengi vanogona kuteerera kune yavo yavanoda Wondery podcasts ne 40% kubva pagore rimwechete kunyoreswa kuWondery +. Sevha inosvika 59% panhengo itsva yegore negore IMDbPro. Vaverengi vanogona kuchengetedza kusvika 80% pa eBooks ane mukurumbira, kusvika ku50% pakusarudza Kindle ega mazita, uye kusvika ku30% pa Gumbo renguva boxed seti.
Kufamba Kwechokwadi uye Zvakaitika: Kune avo vari pane yako runyorwa vane zvese kana vari kutsvaga ruzivo, chengetedza kusvika makumi mashanu muzana pane ese Amazon Ongorora zviitiko, zvinogarwa nenyanzvi dzemuno. Vatengi veUS vanokwanisa kuwana kwakasiyana siyana kwehupenyu, inodyidzana zviitiko pasi rese-zvese kubva mukunyaradza kwedzimba dzavo. Vatengi vanogona kutenga zvinhu zvakasarudzika, kudzidza kuti mazororo anopembererwa sei pasi rese, uye zviitiko zvezvipo kushamwari nemhuri dzavo.
Tenga uye Tsigira Madiki uye Epakati-Sizi Mabhizinesi
Amazon inotambira vanopfuura zviuru mazana mashanu vekuUS vakazvimiririra vanotengesa vadyidzani, mazhinji acho mabhizinesi madiki uye epakati, muchitoro chayo uye inovabatsira kusvika kumazana emamiriyoni evatengi pasi rose, kuwedzera kutengesa kwavo, nekugadzira mabasa-kusanganisira anofungidzirwa miriyoni 500,000 US- based jobs muna 1.8. Vatengi vanogona kutsigira mabhizinesi madiki uye epakati nepakati uye kuchengetedza pazvipo nekutenga Bhizinesi Diki, Amazon Handmade uye Amazon Launchpad zvipo zvinotungamira.